Gaanfa Afrikaatti Bakka bu’aa addaa Yunaayitid Isteets Jeefreey Feeltmaan
Gaanfa Afrikaatti Bakka bu’aa addaa Yunaayitid Isteets Jeefreey Feeltmaan hagayyaa 15 hanga hagayya 24 ti Itiyophiyaa,jibutiidhaa fi Unaayitid Arab Imereett akka daawwachuuf deeman ministeerii dhimma alaa Yunaayitid Isteets beeksiseera.
Akka ibsii ministeeraa dhimma alaa Yunaayitid Isteets Jedhutti Jeefrii efeltmaan wal waaransii Tigraay keessaa ka’ee babal’achaa deemuudhaan sodaa balaa namoomaa umaa jiru akka dhaabatu gaafachuudhaaf garaa Itiyoophiyaa deemu.
Gorsaan Dhimma nageenyaa Prezidaant Joo Baayidan Jaak Suliivan fuulaa tiwuutarii isaanii irratti dhimma kan ilaalchisani yaadaa barreesanin, Prezidaant Joo Bayidan akka ambaassadar Jeefrii Feeltmaan Itiyoophiyaatii deebi’an gaafachuu isaanii himanii, wal waraansii ji’aataaf adeemaa jiru miidhaa guddaa qaqqabsiisuu isaatiin alatii biiyaa guddaa addaan qoqqooduutii akka deemaa jiru ibsaniiru. Gareen hundinuu atattamaan akka gad taa’ee marii taasisu waamichaa goonaa jedhaniiru Jaak Suliivaan.
Lolii ji’oottan sagaliif itti fufe gara naannoo Affaarii naannoo Amaaraatti babal’achaa jiraachuu isaa fi Addi Bilisumaa saba Tigraay / TPLF garee waraan Bilisummaa Oromoo wajjiin hariiroo Umachuu isaa kan ibsee gabaasinn Ajaans Fraans Prees , lola Kanaan kan ka’ee yeroo ammaa namoonnii 400,000 balaa beelaatiif saaxilamuu isaanii ibseeraa.